Izimakethe zomhlaba wonke ze-helium zithintwe yiCovid-19 ngezindlela eziningi
ICovid-19 ibilawula izindaba emasontweni ambalwa edlule futhi kuphephile ukusho ukuthi amabhizinisi amaningi athintekile ngandlela thile. Ngenkathi sekukhona impela amabhizinisi asizuze kulolu bhubhane, iningi lawo - kanye nomnotho uwonke - alimale.
Umthelela osobala kakhulu nobalulekile uncishisiwe kwesidingo. Ekuqaleni, ukufunwa okuvela eChina, okuyimakethe yesibili ngobukhulu emhlabeni, kwehliswa kakhulu lapho umnotho waseChina ufakwa ukuvalwa.
Ngenkathi iChina iqala ukwelulama, i-Covid-19 manje isisakaze kuwo wonke umnotho othuthukile emhlabeni kanye nomthelela jikelele wokufunwa kwe-helium uye waba mkhulu kakhulu.
Izicelo ezithile, ezinjengamabhaluni ephathi negesi yokuntywila, zizoba nzima kakhulu. Izidingo zamabhaluni weqembu, amelela cishe i-15% yemakethe ye-helium yaseMelika kanye no-10% wezidingo zomhlaba, sehle ngokungagudluki ngenxa yokuqalisa kwemizamo yokuphoqelela 'ukuthula' kwabantu ezindaweni eziningi. Enye ingxenye ye-helium engase ibhekane nokuwohloka okubukhali (ngemuva kwesikhashana esincane) iyimakethe engaphesheya kwezilwandle, lapho impi yamanani phakathi kweSaudi Arabia neRussia ibangele khona amanani aphansi kawoyela eminyakeni engu-18. Lokhu kuzofakazela ukuthi kungumthelela omkhulu wokwehliswa okubukhali kwensiza nomsebenzi wensimbi ka-oyela.
Uma sibheka ukuthi ezinye izinhlelo zokusebenza eziningi zibe nomthelela omncane ngokuthe ngqo ku-Covid-19 zizothola ukuncipha kwesidingo ngenxa yokwehla kwamandla omnotho emhlabeni, ukulindela kwami ​​ukuthi umhlaba wonke jikelele we-helium wehle okwesikhashana okungenani yi-10-15% ngenxa yalolu bhubhane.
Ngenkathi uCovid-19 kungenzeka anciphise ukufunwa kwe-helium, kudale nokuthi kube nokuphazamiseka okukhulu kwe-helium supply chain.
Ngenkathi umnotho waseChina uqala ukungena ezindlini, umsebenzi wokukhiqiza nokuthumela izinto kwamanye amazwe wehliswe kakhulu, ukuhamba ngomkhumbi okuningana (okuvela eChina) kwamiswa, futhi kwafakwa imbobo ngenxa yokushoda kwabasebenzi. Lokhu kwenze kwaba nzima ngokungajwayelekile kubahlinzeki abakhulu be-helium ukuthola iziqukathi ezingenalutho ezivela eChina futhi babuyela emithonjeni eQatar nase-US ukugcwaliswa kabusha.
Noma ngabe kunesidingo esiphansi, izingqinamba ekuhanjisweni kwe-container zenze kube nzima ukugcina ukuqhubeka kokuhlinzekwa njengoba abahlinzeki baphoqeleka ukuthi baphikise ukuthola iziqukathi ezingenalutho zokugcwalisa.
Njengoba cishe ama-95% we-helium yomhlaba wonke akhiqizwa njengomkhiqizo womkhiqizo wokulungiswa kwegesi yemvelo noma ukukhiqizwa kwe-LNG, ukuncipha kwesidingo se-LNG nakho kuzophumela ekukhiqizweni okuphansi kwe-helium kuze kufike lapho igesi yemvelo ingena khona ezitshalweni lapho kukhiqizwa khona i-helium kuncishisiwe.